Ireo boky mahafinaritra an'i Mr. Morris Lessmore, fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store | Vaovao IPhone
Ireo boky mahafinaritra an'i Mr. Morris Lessmore, fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store
Apple dia te-hanohy hampiroborobo ny iPad ho mpanelanelana amin'ny famakiana boky amin'ny fomba hafa ary misafidy indray ny boky mifandraika amin'ny fampiharana ny herinandro.
Amin'ity indray mitoraka ity dia miatrika ny anaram-boninahitra "Ny boky manidina mahafinaritra an'i Andriamatoa Morris Lessmore" izay hahaliana ny olona amin'ny sokajin-taona rehetra isika. Miaraka amin'ny fifangaroana eo amin'ny sarimihetsika sy ny tantara fohy, ity boky ity dia novolavolain'ny olona matihanina toa an'i William Joyce, mpanao sariitatra ary animator amin'ny haino aman-jery toa ny The New Yorker, Pixar, Dreamworks ary Disney.
Na dia amin'ny teny Anglisy aza ny famaritana ny fangatahana dia amin'ny Espaniôla ilay boky na farafaharatsiny izay no asehon'ireo pikantsary ao amin'ny App Store.
Ny boky manidina mahafinaritra an'i Andriamatoa Morris Lessmore dia mitentina 3,99 euro ary azonao vidiana amin'ny alàlan'ny fanindriana ity rohy manaraka ity:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ireo boky mahafinaritra an'i Mr. Morris Lessmore, fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store
fitRAIL, ankafizo ny iPado rehefa manao fanazaran-tena amin'ny gym